e-book ဘယ်လိုရေးရလဲ - MYSTERY ZILLION
December 2009 edited February 2010 in DTP
အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ ရေ .... e-book ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ ဘာsoftware တွေသုံးရမလဲ ဆိုတာလမ်းညွန်ပေးပါဦးခင်ဗျာ:D:D:)
ကျနော်တော့ microsoft word 2007 နဲ့ရေးပြီး အဲ့ဒါကို PDF ပြောင်းလိုက်တာပဲ...:6::6:
အစ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ တစ်ဆိတ်လောက်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား အစ်ကို:d:d:)
ကျွန်တော်က အသင်းဝင်ထားတာ ကြာပြီဆိုပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းမှ သုံးဖြစ်တာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်နားမှာ ဘယ်လိုရေးရမယ် ဆိုတာ သိပ်မသိသေးလို့ ဒီမှာပဲ မေးလိုက်ပါရစေ။ ကျွန်တော်သိချင်တာက PDF စာအုပ်တစ်အုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် မာတိကာမှာ ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို လင့်ခ်ချိတ်ချင်တာပါ။ ဥပမာ-မာတိကာမှာ အခန်း(၁) ကွန်ပျူတာအကြောင်း ၊ အခန်း (၂) ဘာသာရေးအကြောင်း ၊ အခန်း(၃)ပညာရေးအကြောင်း ဆိုပါတော့ မာတိကာကနေ အခန်း(၂) ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာမျက်နှာကို ရောက်သွားချင်တာပါ။ လူပြိန်းနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Acrobat စာအုပ်ဖတ်တာ သိပ်နားမရှင်းလို့ပါ။ အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့် ........
လွယ်ပါတယ် အဲဒီ့မှာသာ သွားကြည့်လိုက်ပါ ၅ ဆင့်ပဲရှိတယ်။ Acrobat Professional တော့လိုမယ်ဗျ။
download the pdf creator software from the following link.
It's better and easier than others(freeware) I think.
Open Office မှာဆို တန်းပြီးတော့ print လုပ်လို့ရပါတယ်။
Microsoft office 2003 မှာလဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် လုပ်ဖူးပါတယ်။ အရင်ဆုံး bookmark လုပ်ရတယ် ထင်ပါတယ်။ နဲနဲ ကြာတော့ မေ့သွားပြီ။ Help မှာ ပြန်လိုက်ရှာကြည့်ပါ။ ရှိပါတယ်။ အဲ့လို bookmark လုပ်ပြီး bookmark ကို ပြန်လင့်ချိတ်လိုက်။ နောက်ပြီး pdf ပြောင်းလိုက်ရင် မာတိကာကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာမျက်နှာကို လင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မရရင် ပြန်ကြည့်ပြီး အသးစိတ်ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။ စမ်းကြည့်ပါအုံး ...
Go to the following....
Before CalmHill told .....